Nanambatra Hery ny Mpanolo-tena avy any Slovenia, Makedonia ary Serbia Hanangana Indray Ny Ravan’ny Tondra-Drano · Global Voices teny Malagasy
Nanambatra Hery ny Mpanolo-tena avy any Slovenia, Makedonia ary Serbia Hanangana Indray Ny Ravan'ny Tondra-Drano
Voadika ny 09 Aogositra 2014 20:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Français, Português, 繁體中文, বাংলা, 简体中文, English
Mpilatsaka an-tsitrapo manorina indray lalana ambanivohitra iray ao Slovenia nandritra ny sahan'asan'ny tanora tamin'ny 1960. Azon'ny rehetra ampiasaina ity sary ity.
Taorian'ny tondra-drano nampalahelo vao haingana tao amin'ny faritra, hita niverina tamin'ny fahazarana taloha hanarina ny fahasimbana nateraky ny voina ara-boajanahary indray ny mponina maro avy ao amin'ny firenena Yogoslavy taloha. Tany Kraljevo, Serbia, araka ny tatitra nataon'ny Radio Bosniaka Sarajevo sy ny sampana fampahalalam-baovao Serba Tanjug, nihoatra ny 50 ny mpanolo-tena avy any Makedonia, Slovenia, ary tanàna Serba maro tafavory tao Kraljevo hanao”sahan'asan'ny tanora” iray hananganana indray lalana sy foto-drafitrasa fototra hafa.
Taorian'ny ady lehibe faharoa, fanta-daza manerana izao tontolo izao, araka ny nametrahan'ny mpanoratra iray tsy nitonona anarana azy ho “toerana tokana ahitana rindrin-tariby mihevotrevotra’, ny firenena iray norafetin'ny fanjakana eoropeanina atsimo-atsinanana enina ary nomena ny anarana ho Repoblika Sosialista Federalin'i Yugoslavia. Nifikitra mafy amin'ny maha-firenena sosialista azy i Yugoslavia — izy no firenena komonista tokana tao Eoropa Atsinanana tsy mba zanak'i URSS (Firaisana Sovietika). Izay no mahatonga azy avela mitondra tena irery rehefa tsara fifandraisana amin'ny Tatsinanana sy ny Tandrefana amin'ny ankapobeny. Ny tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona amin'izao dia noravaravain'ny Ady Lehibe Faharoa tanteraka ity firenena tanora iray voarafitry ny fikambanan'ny fanjakana vitsivitsy ity, ary saika ny firenena ihany no nanarina manontolo ny tenany avy amin'izany faharavana izany.
Asam-panoloran-tena nalaza nandritra ny vanim-potoana Yogoslavy taloha ny Sahan'asan'ny tanora, izay nomanin'ny Ligin'ny Tanora Komonista ao Yugoslavia. Ny ankamaroan'ireny Sahan'asan'ny tanora ireny no nananganana ny lalana, lalamby, fokontany vaovao ary ny Lalamben'ny Firahalahiana sy ny Firaisankina, izay manavatsava 1.180 kilaometatra manerana ny firenena, miainga avy any Slovenia any avaratra andrefana ka hatrany Makedonia any atsimo atsinanana. Nanjavona niaraka tamin'ny fianjeran'i Yugoslavia moa ireny hetsika ireny.
Niainga avy amin'ny fifandaminan-dry zareo samy zareo ihany ny Sahan'asan'ny tanora ao Kraljevo amin'izao fotoana izao io, hetsika fandraisana andraikitra mahaolompirenena, tarihin'ireo olona vitsivitsy nandray anjara tamin'ny Sahan'asan'ny tanora nandritra ny vanim-potoanan'i Yugoslavia taloha. Nifantoka tamin'ny toerana 10 anatiny sy manodidiana ny tanàna “tsy nosokajian'ny” sampan-draharaham-panjakana ho simban'ny tondra-drano ry zareo, midika izany eo anatrehan'ny manampahefana fa tsy dia nahapotehana loatra ny fotodrafitrasa sy ny fonenena tao amin'ireo toerana ireo ka tsy mahazo ny fanampian'ny governemanta amin'ireo sokajy enina natsangana hanaovana izany.
Ny ankamaroan'ireo mpanolotena 50 ireo dia tanelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 30 taona. Zoran Stevovski avy any Ohrid, Makedonia, no iray amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo zokiny indrindra sy nampahatsiahy tamin'ny Radio Sarajevo ny zava-niainany nandritra ny Sahan'asan'ny tanora nokarakaraina nandritra ny vanim-potoanan'i Yugoslavia taloha:
“Predsjednik sam udruženja koje okuplja bivše akcijaše, ali i one mlađe, koji žele da učestvovati u ovoj našoj priči. Bio sam 12 puta na radnim akcijama, a počeo sam upravo u ovim krajevima, na Moravi, 1979. godine i to je trajalo do 1990. godine u Beogradu. Radili smo na nasipima Zapadne Morave i Rasine. Vratio sam se tamo gdje sam i počeo”, kaže Stevovski.
“Filohan'ny fikambanana nanangona ireo mpilatsaka an-tsitrapo tamin'ny sahan'asa taloha aho, sy ireo mbola tanora te-handray anjara amin'ity tantaranay ity. Nandray anjara in-12 tamin'ny sahan'asa aho ary nanomboka izany teto amin'ity faritra ity indrindra, teo amin'ny reniranon'i Morava, tamin'ny 1979, ary naharitra hatramin'ny 1990 tao Belgrade izany. Niasa teo amin'ny fefiloha andrefan'i Morava sy Rasina izahay. Niverina teto amin'ny nanombohako aho,” hoy i Stevovski.
Mampiseho ny tanora ao anatin'ny sahan'asa indrindra ity lahatsary YouTube ity, izay anmpiditra ny mpanolo-tena amin'ny sokajin-taona rehetra nanangana ny Lalamben'ny Firahalahiana sy ny Firaisankina, nampifandray fanjakana enina nandrafitra ny Repoblika Sosialista Federalin'i Yugoslavia. Hita ao amin'ny lahatsary ihany koa ny sarin'ny mpitarika Yugoslav Josip Broz Tito tamin'izany fotoana izany niarahava ny mpanolo-tena nahatontosa ny fampanantenany hamita ny lalambe ara-potoana tao anatin'ny herintaona (Misy dikantsoratra amin'ny teny anglisy).
Nanomboka tamin'ny dimy ora sy sasany maraina ny sahan'asa tao Kraljevo ry nifarana tamin'ny folo ora alina, izay nelanelanina fitsidihana tranoben-kolontsaina, fiaraha-misakafo ary fialam-boly sasantsasany nandritra ny fanaovana ny sahan'asa.
Tantaran'ny Makedonia farany
Ao Makedonia Avaratra, misy tanora sasantsasany nahavita nanangana orinasa mahomby nandritra ny valanaretina Covid-19
Fahasalamàna 4 herinandro izay
Nanome rariny ireo mpanao gazety Makedoniana voaheloka noho ny fanalam-baraka ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona
Fahalalahàna miteny 4 herinandro izay
#StandWithUkraine: Miantso ny hamaranana ny ‘daroka rosiana’ ny mpanao fihetsiketsehana ao Makedonia Avaratra
Okraina 06 Avrily 2022